ချစ်ခင်စုံမက်သို့သုတေသနပထမဦးဆုံး 2017၏သြဂုတ်လတွင်ရေးဆွဲခဲ့သည်:ပြီးခဲ့သည့်3နှစ်ကျော်,ပန်းရောင်အပေါက်စုပေါင်းစုပေါင်းငါတို့သည်သင်တို့ကိုချစ်တာပေါ့ထင်သောငါတို့အလွန်ပထမဦးဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းထုတ်ဝေဖို့မဆုပ်အနစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့! စည္းလံုးညီၫြတ္မႈအင္ဂ်င္ေပၚတြင္တည္ေဆာက္ထားေသာကြ်ႏု္ပ္တို့အသင္းသည္ယခုႏွစ္၌ရုပ္ျမင္သံၾကားရိုက္ႏွက္ခံရေသာဂိမ္းေခါင္းစဥ္မ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္လာမည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိတို့၏တံပိုးမှုတ်ခြင်းကိုမုန်းသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းစဉ်ကိုမြန်မြန်ကြည့်ခြင်းကကမ္ဘာချီအဆင့်မီကစားပွဲတစ်ခုကိုထုတ်ဝေနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်ကိုယုံကြည်စေသင့်သည်။
သင်တာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့ကစားနိုင်သည်ကိုမှတ်ချက်-ကိုယ့်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးဂိမ်းကစားရ! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းကိုမိုက်ခရိုအပိုင်းကိန်းပုံစံပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ဆိုလိုတာကသင်ဟာခေါင်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုအပြည့်အဝခံစားဖို့တစ်ပြားမှပေးစရာမလိုဘူးဆိုတာပါ။ သင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထောကျပံ့ဖို့လိုပါလျှင်,သင်လုပ်နိုင်–ကိုယ့်စတိုးဆိုင်၌အကြှနျုပျတို့၏ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များကိုတဦးဝယ်နှင့်သင်၏ဂိမ်းအတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်!
ခပ်သိမ်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးနောက်,သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာဗာများမှတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်လိမ့်မည်,သင်ကိုယ်တိုင်,ကယ်ဖို့မလိုအပ်အတူသင်တို့စိတ်တော်နှင့်တွေ့သကဲ့သို့သင်တို့လာနှင့်သွားကြဖို့ခွင့်ပြု. နောက်တစ်ကြိမ်သင်ကစားလိုသည့်ဂိမ်းမီနူးအခြေအနေတွင်သွားခြင်းဖြင့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသိမ်းဆည်းပြီးဝန်တင်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။သို့သော်၎င်းသည်သင်နှင့်လုံးဝသက်ဆိုင်ပါသည်။ ဒီမိုးတိမ်အင်္ဂါရပ်ကသင်ကစားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ကိရိယာတွေ၊ဘရောက်ဆာတွေအားလုံးမှာသင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုတပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်စေပါတယ်။
ဒီမှာအောင်မြင်မှုစနစ်ဂိမ်းပြန်ဖွင်နိုင်စွမ်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေး၏အမြန်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူဖန်တီးခဲ့နှင့်သင်ဆဲခြုံငုံတိုးတက်မှုလုပ်နေပါတယ်တူခံစား. ဖါ 1.3 နှင့်အတူကျနော်တို့ဒိုင်ယာရီစာမျက်နှာများတွင် 250 အောင်မြင်မှုများနီးစပ်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ သူတို့ကတစ်ဦးချင်းစီအမိန့်ကြော်ငြာစာအိုင်ကွန်ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုဖေါ်ပြခြင်းလက်ငင်းစာတိုနှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်တစ်ဦးချင်းခြေရာခံနှင့်ဆုလာဘ်နှင့်အတူလာ.
အများဆုံး၏ဆုလာဘ်တွေဟာဘယ်တော့မှမြင်မီအပိုင်းပိုင်း၏အနုပညာလက်ရာများအကြောင်းသင်ဖွင့်လှစ်သင်လိုချင်တာအခါတိုင်း၊အချို့ကိုသင်ပေးလိမ့်မည်အသစ်နှင့်အတူ NPCs နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အကြံပေးချက်များ၊မျက်နှာပြင်အကြောင်းလည်းဖော်ပြပေးလုပ်ငန်းများ၊ပစ္စည်းများနှင့်ဇာတ်ကောင်အကျိုးကျေးဇူးများသင်ဖို့ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်စႏိုင္သည္နှင့်ပိတ်သည့်အခါတိုင်းသင်ဆန္ဒရှိ။
ခရက်ဒစ်ဘားစိန်ခေါ်မှုတွေအမျိုးမျိုးအတွက်နယူးဖြစ်ရပ်များပြီးသားရရှိနိုင်ပါသည်. အဘယ်သူမျှမသေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုအားလုံးပြီးစီးခဲ့ပြီ(အချို့ကယ့်ကိုခက်ခဲသူတွေကိုရှိပါတယ်!)သို့သော်န်းကျင် 20 ကစားသမားကျော်ရှိ 90%သူတို့ထဲက. ကနဦးအောင်မြင်မှုတွေအားလုံးကိုရဖို့ပထမဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထူးဆုတစ်ခုပေးအပ်မှာပါ။
ဖီဖာအတွက် 1.5,ကျွန်တော်အနည်းငယ်ပိုပြီးအောင်မြင်မှုတွေထည့်သွင်းဖို့တာပေါ့နှင့်,နောက်တဖန်အ,ဆုလာဘ်အခြားသူများရှေ့တော်၌ထိုအောင်မြင်မှုများဖြည့်စွက်ဖို့စီမံခန့်ခွဲသောသူတို့အားထုတ်ပေးလိမ့်မည်. အဆိုပါဆက်ပြောသည်ခရက်ဒစ်ဘားလွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲပြီးနောက်များစွာသောအခြားစိန်ခေါ်မှုများများအတွက်အစေခံပါလိမ့်မယ်. သငျသညျလုံးဝချွတ်ဂိမ်းပြီးအောင်မှကြိုက်နှစ်သက်မယ့်ဂိမ်းကစားသူဆိုရင်ပြောလုံလောက်သော,ဒီတစ်ခုအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးသွားမှာပါ 100%ကြိုးစားကြရန်ပစ်မှတ်.
သင်ကိုယ်တိုင်ဖြုန်းတွေ့နိုင်ပါသည် 5-10 ပင်ဂိမ်းစတင်မီမိနစ်,ရိုးရှင်းစွာသင်သည်သင်၏အခွက်တဆယ်မှတ်ရှိသည်သောသေချာစေရန်,ထွက်ခွဲထားခဲ့သည်သစ်ပင်နှင့်အခွင့်. သင်စုန်းအတွက်ပွင့်အဆင့်အဖြစ်,သင်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာသင့်ရဲ့ဇာတ်ကောင်အားကောင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စေနောက်ထပ်ရမှတ်သော့ဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။
အိုင်များစွာတွင်အညွှန်းစာမျက်နှာများနှင့်လှုပ်ရှားမှုရွေးချယ်မှုများရှိသည်။ ကျေးဇူးတင်စရာ,ဤသူအချို့လှုပ်ရှားမှုများဖျော်ဖြေခြင်းဖြင့်ဂိမ်းတီထွင်နိုင်ပါတယ်(လေ့လာနေ,အလုပ်လုပ်ကိုင်,လေ့ကျင့်ခန်း,စသည်တို့ကို.)ဒါပေမယ့်အားလုံးကိုအလွယ်တကူလာကြလိမ့်မည်မထင်ကြဘူး! ရီရာဟာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒါကိုကျွန်မတို့ကြိုက်ကြတယ်။
ချစ်ခင်မှုကိုသုတေသနရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အများစုဟာမာယာရဲ့တိုက်ခန်းမှာနေရာယူတယ်။အဲဒီမှာအခန်းမျိုးစုံပစ္စည်းမျိုးစုံကိုမာယာရဲ့မြည်းကြီးတင်မဟုတ်ပဲယုတ်မာတဲ့တုံ့ပြန်ဆက်သွယ်မှုအတွက်သုံးနိုင်တာကိုသေချာအောင်လုပ်တယ်။ မာယာအကြောင်းအရာကလည်းအဓိကဆွဲဆောင်မှုပါ။အကြောင်းကအခြားဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ဝင်စွက်ဖက်တတ်လို့ပါ။ အသစ်ဇာတ်ကောင်လော်ရာအကျိုးစီးပွားလည်းဖြစ်ပါသည်,ထိုလော်ရာသောအကြောင်းအရာများကိုတိရစ္ဆာန်ဂိမ်းများအတွက်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့သောကြောင့်,.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖာထေးထောက်ခံသူတွေကမေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်အသစ်တစ်ခုကိုအလိုရှိသောတည်နေရာလည်းရှိပါတယ်. သူတို့ဟာအထက်တန်းကျကျစတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်အပြင်ကိုလိုချင်ခဲ့ကြပြီးဒါနဲ့အတူအိမ်နီးချင်းအကြောင်းအရာတွေထပ်ထည့်ဖို့စဉ်းစားခဲ့ကြတယ်၊နေရာမျိုးစုံနဲ့လည်းလိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေပိုဖြစ်နိုင်ခြေကိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်မှာပါ။ အထက်တန်းကျကျစတိုးဆိုင်ကဆက်ပြောသည်နှင့်အတူ,ပစ္စည်းများများအတွက်စျေးဝယ်ဖို့ကစားသမားတွေသိသာအကြောင်းပြချက်ပေးမည်ကြောင်းဖြစ်ရပ်များစတင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းရှိ၏. ဒါကြောင့်မိုတယ်ဧဝကိုအတွင်းခံပစ္စည်းတွေဆက်တိုက်ထည့်ပေးခဲ့တယ်။
ဇာတ်ကောင်အသစ်တွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်မာယာဟာအကြောင်းအရာတွေပြန်ရေးဖို့လည်းလိုအပ်ခဲ့တယ်။ ဇာတ်ကောင်အသစ်တွေ၊တုံ့ပြန်မှုမှတ်တမ်းတွေ၊မာယာသစ်စာတိုတွေစာတိုတွေစာတိုအသစ်တွေထပ်ထည့်ပြီးပြီ၊ဓနိမိုးခေါ်ဆိုမှုအတွက်ဖြတ်လမ်းအဖြစ်သုံးမယ့်အဆက်အသွယ်တွေနဲ့ပါ။ ငါတို့သည်လည်းသင်စပ်အသေးစိတ်ကိုအများကြီးပေးမည်ဟူသောဒိုင်ယာရီစာမျက်နှာများတွင်ထည့်သွင်းပါတယ်.
ချစ်ခင်စုံမက်သို့သုတေသနအတွက်လိင်အင်ဂျင်ဖြစ်ကောင်းအခုအချိန်မှာအရွယ်ရောက်ဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်–ကြောင်းဖြစ်စေယုံကြည်မပါဘဲပြောတစ်ခုခုမယ့်! သင်ချစ်ခင်စုံမက်သို့သုတေသနအတွက်မိတ်ဖက်တွေနဲ့လိင်ကဆက်ဆံတဲ့အခါ,သင်တို့သည်ဤမျှအလိုဆန္ဒလျှင်သင်အရေးယူကျော်ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုကျယ်ပြန့်အဆင့်ရပါလိမ့်မယ်. အခုတော့,ဂိမ်းနှင့်လိင်အင်ဂျင်မြင်ကွင်းများလုံးဝအလိုအလျှောက်ကစားရန်လုံးဝဖြစ်နိုင်မယ့်,ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အနည်းငယ်ထိန်းချုပ်မှုရှိခြင်းခြုံငုံကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ထင်.
ဤသူခေါ်ဆောင်သွားဂိမ်းထဲမှာသင့်ရဲ့တွေ့ဆုံဖြစ်လိမ့်မည်ကိုမည်သို့အသည်းအသန်သို့မဟုတ်ဘယ်လောက်ညစ်ပတ်ဆုံးဖြတ်. ကနေရှေးခယျြဖို့ရာထူးများစွာရှိပါတယ်,လိင်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများကို,မြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုများ,နက်ရှိုင်းသောအဆင့်ဆင့်နှင့်ပင်လကျခံ/သင်အမှုအရာအကျင့်ကိုကျင့်တူခံစားဘယ်လိုပေါ်မူတည်.ရွေးချယ်နိုင်သည်ကြောင်းကြီးစိုးအခန်းကဏ္ဍ. တက်ဘလက်ကိုအသံဖြင့်သရုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်အခြားနေရာများကိုရှာဖွေရန်ရုန်းကန်ရသည့်အတွေ့အကြုံမှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
နေရာအနှံ့ကခလုတ်တွေနဲ့ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတဲ့ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့စွန့်စားမှုပါ။ ခင်ဗျားဟာအဲယားဘတ်စ်လေယာဉ်မောင်းခန်းထဲရောက်နေသလိုခံစားရကောင်းခံစားရနိုင်ပေမဲ့ထိန်းချုပ်မှုချိတ်ဆွဲလိုက်တာနဲ့တကယ့်ကိုအထင်ကြီးစရာဂိမ်းဆော့တဲ့ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက်ဆုချခံရမှာပါ။ ဒါကြောင့်ထွက်ကြိုးစားပါနှင့်ကိုယ်အဘို့ကြည့်ရှု–ဒါကြောင့်ကြယ်ပစ္စည်းပစ္စယရဲ့!
ဒါကဂိမ်းအသစ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ,,ဒါပေမယ့်နောက်ကွယ်မှအဖွဲ့ကခေါ်ဆောင်သွားဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်. ဤသည်ယခုအချိန်အထိအအောင်မြင်ဆုံးခေါင်းစဉ်ထွက်သည်,နှင့်ခေါ်ဆောင်သွားဂိမ်းများအတွက်နယ်ပယ်အပေါင်းတို့၌ကြီးမားသောကုမ္ပဏီများသည်မိမိတို့အဘို့ငါတို့စီမံကိန်းကိုဝယ်ခြင်းငှါကြိုးစားခဲ့ကြ. ဒါပေမဲ့ပက်ထရစ်ဆိုတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုရှိတာကိုသိပြီးဒီပြပွဲကိုကိုယ့်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့ကိုယ်တိုင်လည်ပတ်နိုင်တာကိုသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ ကနဦးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အပြီးမှာအမှားပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးမလိုတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုထုတ်ဖို့စီမံခဲ့တယ်။ ဗေီဗားရှင်းကနေသွားဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီ.
ဒါပေမဲ့အမှားပြင်ဆင်စရာမလိုတာတောင်မှဒီဂိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက်အမြဲတစေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြုပြင်မွမ်းမံမှုအများစုသည်စတိုးဆိုင်သုံးပစ္စည်းများ၊အတွင်းခံအဝတ်အစားများ၊လိင်ကစားစရာများထည့်သွင်းရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အန်းဒရွိုက်ဘာသာစကားဖြင့်ကစားပွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတည်ဆောက်မှုပဋိပက္ခကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဂဏန်းများအညွှန်းစာမျက်နှာအမှားများကိုလည်းပုံသေသတ်မှတ်ထားပါသည်။
ဂိမ်းများအတွက်အများဆုံးမေတ္တာရပ်ခံအင်္ဂါရပ်ခိုးမီနူးခဲ့. ရိုးရိုးသားသား,ချိုမြိန်ချစ်ခင်စုံမက်၏အဖွဲ့ဂိမ်းများအတွက်ယူအက်စ်ခိုးရှိခြင်းနှင့်အတူစိတ်လှုပ်ရှားမဟုတ်ပါဘူး,ဒါကြောင့်အတွေ့အကြုံလျော့နည်းစေတူကျွန်တော်ခံစားမိသောကြောင့်,. ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ကိုထောက်ခံသူတစ်ယောက်ကကျွန်မတို့ကိုပြောတယ်ဆိုတာကိုနောက်ဆုံးမှာထည့်ပြောဖို့ယုံကြည်သွားတယ်။ တစ်ခိုးချအင်္ဂါရပ်ကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့ကစားသမားကိုပြန်သွားနှင့်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်ကိုခံစားဖို့အခွင့်အလမ်းပေး. အဆိုပါရေပူစမ်းဘေးထွက်ဇာတ်ကောင်ရောက်ရှိရန်အခက်ခဲဆုံးရှိကြ၏။
အခုတော့ကြောင့်လိမ်လည်သူများမီနူးများ၏ရေပူစမ်းတည်နေရာနှင့်အတူလူတိုင်းကယ်လီအဆင့်ကိုခံစားနိုင်,သောကျွန်တော်တစ်ဦးအီစတာကြက်ဥအဖြစ်စောင့်ရှောက်ခြင်းအပေါ်စီစဉ်ထားသည်. ကျနော်တို့မရှိတော့လျှို့ဝှက်အဆင့်အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ နေဆဲဂိမ်းထဲမှာအီစတာကြက်ဥလည်းမရှိ,ဘယ်သူမှမရှိသေးပါရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ယခု:သင်မည်သို့ကိုယ်အဘို့ဤဂိမ်းကိုထုတ်ကြိုးစားချစ်ခင်စုံမက်သို့သုတေသနသို့တက်လက်မှတ်ထိုးနှင့်ပတ်သက်.? သတိရ,ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအမြဲဖြစ်လိမ့်မည် 100%အခမဲ့နှင့်သင်မည်သည့်စက်ကိရိယာပေါ်မှာကစားနိုင်ပါတယ်!